DG-yada oo war ka soo saaray khilaafka Farmaajo iyo Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
M/weynayaasha Maamul Goboleedyada, ayaa muddo dheer kadib si wadajir ah u soo saaray Warsaxaafadeed ay kaga hadlayaan xaaladda dalka, waxayna si weyn kaga gaabsadeen qodobada ubucda u ah khalkhalka Siyaadaseed ee Mr. Farmaajo dalka galiyey.
JOWHAR, Soomaaliya - Hoggaamiyeyaasha shanta Maamul Goboleed ee Soomaaliya ayaa soo saaray Warsaxaafadeed ku aadan, xaaladda cakiran ee uu dalku galayo marba marka kasii dambeysa, oo ay ugu dambeysay, fariintii Farmajo ee aheyd hakinta awoodda ra’iisul Wasaare Rooble, taas oo aysan jirin sharci u oggolaanaya, maadaama uu waqtigii xil heyntiisa sharciga ahi ay goor hore idlaatay.
Madaxweynayaasha Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Puntland, Koonfur Galbeed, Jubaland, Galmudug iyo Hirshabelle, ayaa kulan fogaan arag yeeshay, kuwaas oo xaaladda dalku galay iyo sida looga gudbi karo ka shiray. Wax laga xumaado ayay ku tilmaameen waxyaabaha sii kala fogeynaya Farmaajo iyo Rooble, taas oo qalalaaso abuuri karta.
Waxa ay ku baaqeen in la tixgeliyo ku dhaqanka Dastuurka KMG, ee Dowladda Federaalka Soomaaliy iyo in la ixtiraamo, laguna dhaqmo heshiisyadii ay horey u gaareen Madaxda Dowladda Federaalka ah iyo Dowladaha Xubnaha ka ah ee 17 September 2020, 27 May 2021 iyo 22 August 2021.
Waxa ay ku taliyeen in baaritaanka kkiska Sarkaalad Ikraan Tahliil Faarax loo maro hannaanka Qaanuunka Dalka, iyadoo loo madax banaynayo hay'adaha ku shaqada leh ee hadda gacanta ku haya.
“Madaxweynayaashu waxay ugu baagayaan Guddiyada Farsamo ee hirgelinta doorashada ee labada heer (FEIET iyo SIEIT) in ay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyada doorashada ee la saxiixay 22 August 2021”. Ayaa sidoo kale lagu yiri waraka ka soo baxay Madaxda Maamullada.
Waxay ku heshiiyeen inay shir gaar ah, oo ay isugu imaanayaan madaxda maamul goboleedyada lagu qabto magaalada garoowe, Talaadada soo socota oo taariikhdu ku beegan tahay 21 bishan Septemberda, kaasi oo socon doona ilaa 23 bishan.
Qoraalka ka soo baxay Madaxweynayaasha Dowlad goboleedyada oo qudheeda la rumeysan yahay in ay qeyb ka yihiin xasaradda siyaasadeed ee dalka, ayaa loo fasiray mid gurracan oo aan si buuxda uga uga turjumeyn xaaladda uu hadda dalku ku sugan yahay.
Maamulladu, waxa ay afka ka dhowreen, sharci ku tumashada uu Farmaajo wado, waxa ay ka gaabsadeen ka hadalka ubucda khilaafka oo ah shaqo ka raacdeyntii eedeysane Fahad Yaasiin, isla-markaana, waxa ay si maldahan u dul mareen Kiiska Ikraan, waxayna indhaha ka xirteen dadaallada uu Farmaajo ku doonayo inuu ku daboolo kiiska gabadha ku maqan gacanta kooxdiisa.
Hadaba, halkaan ka aqriso war-saxaafadeedka ay soo saareen Madaxweyna-yaasha Maamul goboleedyada.